Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta sare oo iskuulka dhagoolayaasha ku wareejiyey Gaari Bus ah. – Ministry of Education in Puntland
By editor	/ March 20, 2018
20/ March/ 2018- Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta sare ee Dowlada Puntland waxay iskuulka dhagoolayaasha ku wareejisay gaari noocsu yahay Bus Nissan Haice( KHZ106-00138449).
Markii Aragtay Wasaaradda Baahida Dugsiga dhagoolayaasha ay u baahan yihiin Gaadhi u adeega aradayda Dugsiga Dhagoolayaasha madama ay baahi wayn u qaban gadhi lagu qado caruurta yare ee Wax kabarata Dugsiga dhagoolayaasha.
Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliin ta sare Maxamed Cali Faarax (Farmayeeri) isagoo ku wareejiyey Buska iskuulka dhagoolayaasha Garowe: waxuu ku baaqay dhamaan masuuliyiinta dawlada Puntaland iyo, shacabka, ganacsatada, haayadaha iyo ururada bulshada iyo sidoo kale qurbojoogta Puntalnd kuwo maqalka qaba iyo kuwa maqalka ka naafada ahba meel kasta oo ay joogaan gudo iyo dibedba inay isgarab taagaaan ubadkaas yar yar ee manta u baahan garabqabashada uga baahan yihiin Waxbarshada Gaarka ah.
Qurbojoogata maqalka ka naafada ah waxaan iyagana si gaar ah ugu boorinayaa inay kaalin mugle ka qaataan u gargaarida iyo kaalmaynta ubadka yaryar ee aan wax maqal isla markaana ay xil iska saaraan sida ay ubadkooda daryeelkiisa xilka iskaga saaraan.
Agaasimaha Hay’adda Daryeelka Dhagoolayaasha Sakairiye Siciid Yuusuf ayaa uga Mahad celiyey Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta sare Buska ay ku wareejiyeen iskuulka dhagoolayaasha waxaa u qabanaya baahi ugaara dhagoolayaasha meelo badan, balase waxaa u bahanahay in garab mar walba nalasiiyo angoo baahi gaara qabna, ardayda wax ka baranaaya dugsiga dhagoolayaasha ee Magalada Garowe waxa ay iskaga yimaadeen xaafado aad uga fog fog iskuulka.
Hoos ka Daawo Sawirdda